दुःख आफैँ दुख्ने गर्छ-Brtnepal.com
Published on October 2, 2016 at 9:27 am
संसार दुःखै दुःखले निर्माण भएको हो भन्छन् –ज्ञानी र सन्तहरू ।
दुःखको अनुभूति दुखानुभूति औ सुखको अनुभूति सुखानुभूति । विधाता भन्नुस् या प्रकृति जे लेबल दिए पनि हुन्छ सृष्टिकर्तालाई ।
उपमा, चिन्ह वा विम्बले सृष्टिकर्ताको अवमूल्यन गर्दैन बरु चिन्मय नूतन प्रकाशको आलोकमा आलोडित हुने अवसर दिनेगर्छ ।
रेखाचित्रमा जीवनलाई खर्लप्पै उतार्न सफल हुन्छन् चित्रकारहरू । सुखमय नाद र दुःखमय लयलाई त्यो सिम्फोनीको रागमा तन्मय भङ्गीसाथ बजाउन सक्षम छन् –सङ्गीतकारहरू । लेखिएको वा नलेखिएको भनिएको अन्तर्वस्तु लेखेर मानिसलाई दुःखको दोलाईँ र सुखको सिरकले न्यानो पार्न प्रकारान्तरले चिर नूतन कालसम्म चलायमान हुने लेखक केवल समाजको वारेस हो । ऊ समाजको सदस्य भएका नाताले सामाजिक विषयवस्तुमा आफ्ना दृष्टिकोणहरू मिलाएर कलाका विभिन्न आयामहरूलाई मात्र अभिव्यक्त गर्ने हो । समाजले नपचाउने विषयवस्तुहरू लेख्न कुनै पनि लेखकलाई छुट छैन र दिनु पनि हुँदैन । एउटा लेखकले समाजमा भएका रासौंरास पीडा, अथाह दुःखका सुमेरूहरू, शोकका सगरमाथाहरू, चिन्ताका पिरामिडहरू र उकुच पल्टेका घाउका सुख्खा फाँटहरूमा कलाको चुस्तचुस्त मलम लगाएर मुक्ति दिने हो, कोमल धृति दिने हो । अनि दिने हो समनको त्यो अतुलनीय शक्ति जसले अरूका गहबाट उत्सर्जित ती नुनिला पानीका निर्झरलाई चित्र, गीत र वाणीका माध्यमबाट मनोलोकको अव्यक्त एवं अलौकिक शान्ति दिन्छ ।
‘मन’ लाई ‘ईश’ मा जोडेर मानिस भनिएको हो –शाब्दिक परिचयमा ।
मानिस यो संसारमा यतिका विधि सम्वेदनशील नहुँदो हो त अन्य कुन प्राणीले त्यो भूमिका निभाउँदो हो ? कुकुर, सुगा, चिम्पान्जी या डल्फिन ? या अरू कुनै अविदित प्राणी ? अँध्यारो गर्तमा छ –यो ज्ञानको उत्तर ।
कलाका कोलम्बस क्रोचे हुन् कि धर्तीका वास्तविक क्रिष्टोफर कोलम्बस । आफैँ जसले एकातिर मनोलोकको खोज र सन्धान गरे भने अर्काले भूतलको धुइँपात्ताल खोजी ।
यसै भन्न सकिन्न । संसारमा अझै पनि यस्तायस्ता विदित सन्दर्भहरू हाम्रा अघि बग्रेल्ती छन् । तिनीहरू मिहीनरूपले केलाएर खोजेका मेसोमा अविदितझैँ लाग्छन् । हामी मानिसहरू आफ्नो भएभरको बोधो बुद्धि अर्जापेर पनि तिनीहरूको वास्तविकता पत्ता लगाउन समर्थवान् छैनौँ –जस्तै ः दुःखको सन्ताप ।
दुःखको स्रोत भन्नु नै चिन्ता र शोक हो । शोक र चिन्ताका अनुजका रूपमा हामीले दुःखलाई अपनाएका हुन्छौं । यदि मानिसमा कुनै वस्तुप्रतिको ललक नहुने हो भने त्यसले उसमा चिन्ता नै प्रकट गर्ने थिएन र चिन्ताबाट सन्तानका रूपमा दुःखको जन्म हुने थिएन । हामी किन दुःखी हुन्छौं ? सार्वभौम रूपमा परिभाषा दिन गाह्रो छ । अनेकानेक चिन्ताका स्वरूपहरूको लहरामा मानिसहरू लहरिन्छन् र दुःखका सागरमा पौरी खेल्न पुग्छन् ।
देवकोटाले निकै अघि भनेका पनि छन् –‘संसार नै दुःख सागर हो जान भाइ ।’ सृष्टि दुःखबाटै सुरु हुन्छ –दुःखमै अन्त्य । चेतनलाई नै दुःखसुख र अनेकानेक हर्षातिरेक भावहरू पनि आउँछन् । अचेतन र जडको त के कुरा भयो ? भगिरथ प्रयत्नका पहाडहरू चढ्न त्यसै सजिलो कहाँ हुन्छ ? सफलताका शिखरहरू चुम्न त्यत्तिकै कहाँ सकिन्छ ? जीवनजगत् दुःखको चिडियाघर, हामी त्यसका प्राणी ।
सिकन्जामा बाँधिएका –सबै हामी । हामीलाई यो संसार मित्थ्या लागेर पनि त्यही मित्थ्याकै पछि हिँडाउँदै आफूलाई बुढ्याउँछौं ।
दुःखलाई देख्न, भोग्न र लेख्न सकिन्छ । सहृदयी आत्माहरूले दुःखलाई देखेका छन् । लेखेका छन् ।
त्यो लेखक सफल लेखक हो जसले आफ्ना कम र अन्यका दुःखलाई कलाका विभिन्न लेप लगाएर मिहीन शैलीमा प्रस्तुत गर्छ । लेखनको अलौकिक सन्तुष्टि भनेको सायद् त्यही नै हो । हामी आफ्नो सन्तुष्टि लिन लेख्छौं कि समाजप्रतिको दायित्वलाई पूरा गर्न लेख्छौं करिब पैँतिस वर्षको मेरो ऐकान्तिक लेखनमा आजसम्म अनुभूत गर्न सकिरहेको छैन । शास्त्रले त भलिभाँती भनेको छ भनेको छ –साहित्य स्वान्त सुखाय र पर हिताय दुवैलाई आधार मानेर लेखिन्छ । लेखिनुपर्छ । वास्तवमा हामी जो लेख्छौं भन्छौ । सत्येसत्ये हामी जो लेखिरहेका छौँ अनि जे भनिरहेका छौँ । आजसम्म हामीलाई कसैले आफ्नो दुःखाश्रित अश्रुमिश्रित नयनाभिरामले आफ्नो चोरऔंलो ठड्याएर कडिकडाउ गरी प्रश्न गरेको छैन । यदि कुनै दिन त्यस्तो प्रश्न ग¥यो भने हामीले सत्यलाई नचपाइकन बालक शैलीमा खुरूखरू भन्नै पर्छ –सत्यांशलाई केवल रानारूनि छाम्ने मात्रै हो । झिल्काझिल्की मात्रै अनुभव गर्ने हो ।
सत्य त सोझो छ –भनिएको छ । त्यो आम समाजले आफैँ छाम्न र अनुभूत गर्नसक्छ ।
‘मैले मौलिक लेखेँ’ –भन्छन् चिचिले लेखकहरू ।
लेखाउने त समाजले हो । लेखाउने त अव्यक्त शक्तिले हो । लेखाउने त यहाँ लीलामय जादुले हो । पीडाले हो । चिन्ताले हो । बेचैनीले हो । खुसीले हो अनि प्रकृतिले हो । या केले हो केले हो ? आज म यतिखेर दुःखका बारेमा यस शीर्षकलाई न्याय गर्ने मुडमा छु ।
भन्छन् –लेखकहरू मुडी हुन्छन् । हुन पनि त मुड नभइकन लेखनमा विषयवस्तुहरू प्राप्ति हुँदैनन् । फेरि भावनाको तरङ्गमा न तरङ्गिए एउटा लेखक, के लेखक ? लेखकले त अनन्त दुःखका समुद्रमा बाँकटे हान्न सक्नुपर्छ । लेखकले त अविजित युद्धको निस्वार्थी र निडर सारथि भएर दुःखको त्यो महारथलाई हाँक्न सक्नुपर्छ जो अरू जनसामान्यले गर्न सम्भव छैन । हुँदैन । हामीले यो भवसागरमा आएपछि सबैभन्दा पहिले गरेको र जानेको कुरा भनेकै रुन हो । हामी आफ्नी आमाका नौ महिने उदरबाट जब पृथ्वीमा पदार्पण हुन्छौं सबैभन्दा पहिले हामीले आफ्नी जननीलाई ‘म यहाँ छु’ भनेर जनाऊ दिने हो रे ! कतिपय दार्शनिकहरूले त मानिसको स्वार्थीपनको उद्घोष भनेर त्यसबेलाको चिहाँचिहाँ रुने प्रक्रियालाई ध्वनिकरूपमा ‘यहाँ….यहाँ’ सँग दाँजेका पनि छन् । जे होस् मानिसको पृथ्वी यात्राको त्यो प्रथम चेष्टालाई हामीले दुःखका दुरबिनबाट मात्र हेर्न खोजेका हौँ ।
जैन धर्म भन्छ –जो अरूलाई जित्छ त्यो वीर हो, जसले आफैँलाई जित्छ त्यो महावीर हो । हामी जो आफूलाई जित्न पनि सकिरहेका हुँदैनौ ती मानिसले नै रुने कराउने हो । आफूलाई जित्ने त वीरमा परिहाल्छ । यहाँ अनेकौँ किसिमका वीरहरू छन् –युद्धवीर, धर्मवीर, दानवीर, दयावीर अनि कविवर माधवप्रसाद घिमिरेका शब्द सापटीलिएर भन्ने हो भने –कलमवीर ।
स्वार्थका पर्खालहरू नाघेर मानिसले जब आफूलाई त्यो निस्वार्थी मैदानमा पु¥याउँछ त्यसबेला उसका अगाडि घरपरिवारको सिकन्जारूपि मायाका डोरीहरू केवल हरियो चारूमात्र देखिन्छन् । मानिसलाई पुरै विश्वै घरपरिवार नलागिकन ऊ कसैगरी पनि परार्थी र परमार्थी हुनै सक्दैन । आफूलाई पर्दा रुने अरूलाई पर्दा हाँस्ने मानिस त मानिसै होइनभन्दा पनि हुन्छ । यो अहिलेको हाइटेक दुनियाँमा लाग्छ मानिसको दुःख पनि हाइटेक नै छ । दिनहूँका अनेकानेक गोरखधन्दाले एउटा मानिसका मनमुटुलाई यति सारो थङ्थिलो पारिरहेको हुन्छ कि उसले आफ्नो दुःखलाई मात्र केवल आवरणभित्र राखेर दुःख मान्दछ । आफ्ना वरिपरिका मानिसको दुःखलाई कस्मेटिक दुःख मानिरहेको हुन्छ । घडी बाँधेको मानिसलाई समयले यति टुक्र्याइसकेको छ कि ऊ सहरमा पार्ट टाइम जब गर्छ र उसले हाँस्नेरूने काम पनि त्यही पार्टटाइम भित्र आइस ब्रेकझैँ क्षणपलका लागि मात्रै गरेको हुन्छ ।
संसारका रासरास युद्ध र कलहले मानिसमा उसको आँसु पनि झन्डैझन्डै निखारिदिएको छ त्यसैले कतिपय मानिसहरू आफन्त र आफन्तहरूका आफन्तहरूको वियोग र अवसानहरूमा ग्लिसिरिन र आर्टिफिसियल टियर हाल्न विवश छन् । हो, अभिनयका कतिपय सन्दर्भमा त त्यो मनासिवै होला तर वास्तविक दुनियाँमा त त्यो सुहाउने कुरा भएन । रसियन लोकोक्तिले भन्छ –कुकुर पहिले अर्को कुकुर भेट्दा जुध्छ पछि मिल्छ । मानिस चाहिँ पहिले भेट हुँदा मिल्छ र पछि जुध्छ । यहाँनेर हामीले कुकुरालाई गुरु थाप्नु पर्लाजस्तो लाग्छ । कति ज्ञानी प्राणी आफ्नो साथित्वको अनन्तताका लागि दुःखलाई प्रयोग गर्ने गर्छन् । यी सवालको आज खोजी गर्नुपर्छ । उसलाई न पुस्तकीय ज्ञानले त्यति सारो कोमल बनायो न उसले अनुभवका पुञ्जलाई नै उपयोग गरेको छ । हामी मानिस भने अन्तरिक्ष खाएर आकासगंगामा ट्वाइलेट गर्न जाने बेला भैसक्दा पनि कुकुरको जति पनि बुझ्दैनौं ।
कला प्रदर्शनीको आयोजनापश्चात् एक जना फिनिस कलाकारले भनेका छन् –भएको चिजलाई पनि आफ्नो ज्ञानले कुनै अर्को स्वरूप दिन सकिन्छ भने त्यो पनि एक किसिमको कला हो । ती कलाकारले आफ्नो कला सिर्जनामा केवल कोकाकोलाका बोतललाई माथिबाट तल एकातिरबाट मात्र एकै रङले पोतेका थिए । उनका कला हेर्नेहरूले अन्त्यमा आफ्नो मनको खसखस थाम्न नसकेपछि उनलाई प्रश्न गर्दा उनले त्यसो भनेका हुन् । भनाइको तात्पर्य जीवन भनेकै दृष्टिकोण मात्र हो ।
लेखनका सन्दर्भमा र दुःखका मानेमा मलाई यस्तै लागेको छ । सबैका लागि दुःख केवल दुःख्ने गर्छ । अरूको दुःखमा दुःखित हुनेका लागि कुनै कोणबाट पनि दुःख कहिले पनि नदुःख्ने गर्दैन, दुःखिनै रहन्छ दुःखी भएर । दुःख प्राप्ति र प्रसारणका स्रोतहरू पनि अनन्त छन् । पर्नेलाई मेरो दुःखमात्र प्रतिनिधि दुःखजस्तो लाग्छ होला र यो चराचर जगत्मा जति पनि प्राणीहरू गोचरअगोचर रूपमा जीवनलाई जन्मको कलेबरबाट उठाएर मृत्युको मुखमा लैजानका लागि द्रूत या धीमा गतिमा धकेलिरहेका छन् ती सबैमा दुःखको पारो एकै किसिमले चढ्नेगर्छ । अणु जति पनि कमबेस हुने होइन ।
मैले भन्ने गरेको छु । प्रत्येक मानिस कसै न कसैको प्रतिकृति हो । नक्कल हो । फोटोकपी हो । अहिले यसलाई छाँयाप्रति भन्ने गरिन्छ । मानिसको रूप पनि संसारभरिमा सातजनासम्मका मिल्छन् भनेर अघि विद्वान्हरूले भनिसकेका थिए अहिले प्रविधिले पनि भनेको छ । भनेँ नि यो हाइटेक प्रविधिले संसारलाई अधुनातन सुविधा र सौविध्यता थपिदिएको छ तर प्रविधिले कसैलाई पनि भेदभाव गर्दैन । भेदभाव त मानिसले मानिसकालागि साँचेको त्यस्तो चिज हो जुन चिज ऊ आफ्ना मानिसका लागि तिलमा तौलेर दिन चाहन्छ या चाहदैँन तर पराइ मानिसका लागि भनेँ ऊ डोको भरीभरि भरेर दिन उद्यत्त बन्छ । अनि यहीँबाटै दुःखका आयतनहरू फराकिन्छन् र आँसुहरू छिरलिन्छन् ।
संसारमा मानिसले आफूले जति आँसु बगाएको छ भनिन्छ त्यो आँसुको मापो गर्ने गरिएको थियो भने सारा समुद्रभन्दा पनि बढी आँसु मानिसहरूले बगाइसकेका छन् । बगाइरहेका छन् । गौतम बुद्धले एक ठाउँमा भनेका छन् –सागरको जलभन्दा मानिसको आँसु धेरै बगिसकेको छ ।
दुःख के हो ? मौलिक या अमौलिक ? मौलिक र अमौलिकको यो द्वन्द्व सदियौँदेखि आजपर्यन्त चलिरहेकै छ । यस विषयमा हामी वादविवाद गर्न सक्छौँ तर जसलाई दुःखले अनुभूतिका पर्रा छुट्ने गरी दुःखित हुने मौका जो दिएको हुन्छ ती मानिसको मनमष्तिस्कको दुःखको धरातलमा गएर उभिने हो भने पनि हामीलाई भन्न कर लाग्छ –यो जुन दुःख भन्ने चिज छ नि त्यो आफैँमा मौलिक हो । त्यो अघि न कसैको जीवनमा थियो न पछि कसैको जिन्दगीमा हुनेछ ।
मानिसले दुःख बनाएको हो कि दुःखले मानिसको सिर्जना गरेको हो त्यो सजिलै आँकिने कुरा होइन । त्यसका लागि पनि दुःखका दहमा एकफेर पौरिनै पर्छ । हेलिनै पर्छ –दुःखका नदीहरू जहाँ कुनै गाई हामीलाई आफ्नो आस्थाको पुच्छर समात्न लगाएर भ्रमको वैतरनी तार्न आइरहेको हुँदैन । जसलाई पर्छ उसले नै समन गर्नुपर्छ । जसले भोग्छ उसले नै छाम्न सक्छ –दुःखका सातपत्रे स्वरूपहरूलाई ।
मलाई यहाँ उद्घोष गर्न मन लागेको छ । दुःख नै सिर्जना हो । दुःखले नै मानिसलाई कल्पना शक्ति दिन्छ । नारायणगोपाल हुन् कि अरुणा लामा, लता मंगेशकर हुन् कि कोयली देवी सबैले विरहलाई साधना गर्दै गीत गाएका छन् सङ्गीतमा सिम्फोनी भरेका छन् । लेखनका सिलसिलमा देवकोटा, भूपी, रिमाल, वाशु शशी र हरिभक्तहरूको दुःखले उनीहरूको कल्पनामा दाउन हालेथ्यो । लेखनमा दुःख नहुने हो भने लेखन सुललित हुँदैन । चित्रकारितामा पनि दुःखले नै अहम् भूमिका निर्वाह गरेको छ । जीवनका यी तीन त्रिवेणीहरू यसरी दुःखको प्रिज्ममा हाल्न सकेझैँ हामी पनि दुःखका महासागरमा पौरिने न हो । सफलतालाई चुमेका जो कोही पनि आफ्नो सफलतामा उनीहरूलाई पुरस्कृत गर्दा वा सम्मान गर्दा आँखाबाट हर्षाश्रु बगाई रुने गर्दछन् । यसो किन हुन्छ ? भन्दाखेरी त्यो स्थानमा पुग्न उनीहरूले अथक परिश्रम गर्नु पर्दछ त्यसैले उनीहरूलाई हर्षातिरेकका अवस्थामा पनि आँखाका डिलभरि आँसु टप्किदिन्छन् र रुने गर्छन् । वास्तवमा, अङ्ग्रेजी साहित्यका महान् कवि रोबर्ट फस्टले आफ्नो प्रसिद्ध कविता होम दे ब्राउट हर बाइरियर डेथमा योद्धाकी पत्नीलाई छरछिमेकीहरूले योद्धाका विशेषताहरूको वर्णन गरेर रुन लगाई पागल हुन्बाट बचाउँदछन् र तिनी बाँच्छिन् । आँसुले हाम्रो दुःखलाई धुने गर्छ भन्ने कुरा त कतिपय सन्दर्भमा आफैँ हामी रुँदारुँदा कहिलेकाहीँ हाम्रो शरीर हलौं भएबाट पनि थाहा पाइन्छ ।
लेखक हाल मन्थली उच्च माध्यमिक विद्यालय, मन्थली, रामेछापमा सहायक प्राचार्य हुनुहुन्छ ।